ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): December 2011
သဒ္ဓမ္မရံသီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိတော်နှင့် အန္တိမအဂ္ဂိဈာပနပူဇာပွဲသဘင် အခမ်းအနားအစီအစဉ်
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:31 AM0comments Links to this post
သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ခန္ဓာဇာတ်သိမ်း ငြိမ်းတော်မူခြင်း
မဟာစည်ရတ္တညုနာယက၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက၊ သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာများအားလုံး၏ အဓိပတိဆရာတော်ကြီး
သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်အထူးပြည့်စုံတော်မူသော
မေတ္တာ ကရုဏာအထူးကြီးမား လုံ့လကြီးတော်မူသော
သက်တော်ရှည် သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ ဆရာတော်ဘုရားကြီး
သက်တော် (၉၁) နှစ် ၊ ၀ါတော် (၇၂)၀ါသည်
ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နံနက် ၇း၃၅ နာရီတွင်
ခန္ဓာဇာတ်သိမ်း ချုပ်ငြိမ်းတော်မူကြောင်း ရပ်နီးရပ်ဝေးမှ တပည့်ဒါကာ ဒါယကာမများအား အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရုပ်ကလာပ်တော်ကို (၇)ရက် ပူဇော်ထားရှိမည် ဖြစ်ပြီး ၂၂-၁၂-၂၀၁၁ ခုနှစ် နေ့လည် ၁ နာရီ အချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ကျိုက္ကဆံကွင်းတွင် အန္တိမအဂ္ဂိဈာပနပူဇော်ပွဲသဘင်
(၇) ရက်တိုင်တိုင် အထူးတရားပွဲများကိုလည်း ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ နောက်ဆုံးခရီးမှာ ဒကာ ဒကာမများအနေဖြင့်
နောက်ဆုံး ကျေးဇူးဆပ် ပူဇော်မှုပြုနိုင်ရန် အန္တိမအဂ္ဂိဈာပန တင့်တင့်တယ်တယ် ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
ဇေယျာခေမလမ်း၊ ရှစ်မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ သဒ္ဓမ္မရံသီကျောင်းတိုက်
တယ်လီဖုန်း။ ။ ၀၁.၆၆၁၅၉၇ ၊ ၀၉၄၉၇၇၁၃၅၃
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:18 AM0comments Links to this post
Labels: Saddhammaramsi Sayadaw
နိုင်ငံတော် သြဝါဒါစရိယ၊ မြန်မာစာ သြ၀ါဒါစရိယ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ ထီးချိုင့်မြို့ တည်တောဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ယနေ့ ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ အမှတ်စဉ် ၃ စာအုပ်မှ ဆရာတော်ကြီး၏ ဖြေဆိုထားချက်ကို Suicide ကိစ္စ စိတ်ဝင်စားနေကြသူမိတ်ဆွေများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
(ဆရာတော်ကြီး၏ အမေးအဖြေကို မျှဝေခွင့်ရအောင် source အထောက်အပံ့ပြုပေးသော မထားထားမိုး (http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000658892612) နှင့် ဓါတ်ပုံဖိုင်များအဖြစ် ပို့စ်တင်ထားပေးသော ဘုန်းဘုန်း ဦးလောကနာထ (http://www.lknt11.com) တို့အား ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါကြောင်းခင်ဗျား။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:28 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Articles, Vitadhuba
ကပိလ၀တ်ပြည်၊ နိဂြောဓာရုံ ကျောင်းတော်၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသီတင်းသုံးနေစဉ်အခါ ဖြစ်၏။ ထိုအခါ၌ မဟာနာမ် သာကီဝင်မင်းသည် ဗုဒ္ဓထံသို့ ရောက်လာချဉ်းကပ်ကာ ဤသို့လျှောက်ထားလေ၏။
"အရှင်ဘုရား- ဤကပိလ၀တ်ပြည်သည် လူဦးရေ ထူထပ်ပေါများ၍ စည်ကားလှပါ၏။ လမ်းတို လမ်းရှည်နှင့် ဈေးအိမ်တို့လည်း များပြားလှပါ၏။ အရှင်ဘုရား- တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားကို လည်းကောင်း၊ သံဃာတော်ကိုလည်းကောင်း ဆည်းကပ်ခစားပြီး၍ ညနေချမ်းအချိန်၌ ကပိလ၀တ်သို့ ၀င်သည်ရှိသော် ပြေးသွားနေသောဆင်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံရပါ၏၊ မြင်း-ရထား-လှည်းတို့နှင့်လည်း တွေ့ဆုံရပါ၏၊ အရှင်ဘုရား-ထိုအခါမျိုး၌ တပည့်တော်အား မြတ်စွာဘုရားကို အာရုံပြုသောစိတ်သည် လွတ်သည်သာတည်း၊ တရားတော်-သံဃာတော်တို့ကို အာရုံပြုသောစိတ်သည် လွတ်သည်သာတည်း အရှင်ဘုရား- ထိုအခါ ငါသည် ဤအချိန်၌ သေရမူ ဘယ်ဘ၀သို့လားရောက်ရပါမည်နည်း ဟုတွေးတောမိပါသည်ဘုရား " ဟုလျှောက်ထား၏။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက " မဟာနာမ်-သင်မကြောက်ပါနှင့်၊ မစိုးရိမ်ပါနှင့်၊ သင့်အား မယုတ်ညံ့သော သေခြင်းဖြစ်လတ္တံ့"
"မဟာနာမ်-အကြင်သူသည် ရှည်မြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံး ယုံကြည်မူသဒ္ဓါဖြင့် ထုံအပ်သော စိတ်၊ ဆောက်တည်မူ သီလ၊ အကြားအမြင် သုတ၊ စွန့်ကြဲမူ စာဂ၊ အသိဉာဏ် ပညာတို့ဖြင့်ထုံအပ်သောစိတ် ရှိသူဖြစ်၏၊ ထိုသူ၏ ခန္ဓာရုပ်သည် မဟာဘုတ်လေးပါး အစုအဝေးဖြစ်၏၊ ထမင်း-မုန့်စသော အစာ အာဟာရတို့ဖြင့် ကြီးပွားရ၏၊ ပြုပြင်ထိန်းမတ်ပေးရခြင်း သဘောရှိ၏၊ မတည်မြဲခြင်း၊ ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်း သဘောရှိ၏"
"ထိုခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကို ကျီးငှတ်တို့လည်း ထိုးဆိတ်ကုန်၏၊ တောခွေး၊ အိမ်ခွေးနှင့် ပိုးလောက်တို့လည်း ခဲစားကြကုန်၏၊ သို့သော် မဟာနာမ်- ထိုသူ၏ သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ စာဂ၊ ပညာတို့ဖြင့် ရှည်မြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံး ထုံအပ်သောစိတ်သည်ကား အထက်သို့သာ တက်လေ့ရှိပေ၏၊ ထူးခြားစွာ သွားလေ့ရှိပေ၏၊"
"မဟာနာမ်- ဥပမာအားဖြင့်ကား ထောပတ်အိုးကို ရေအိုင်ထဲ၌ ရိုက်ခွဲလိုက်သောအခါ အိုးခြမ်းကွဲတို့သည် ရေအောက်သို့ကျရောက်၍ ထောပတ်တို့သည် ရေပေါ်သို့ တက်ရောက်ကုန်သကဲ့သို့တည်း။"
"မဟာနာမ်- အရှေ့အရပ်သို့ ကိုင်းညွတ်လျက်ရှိသော သစ်ပင်ကို အရင်းမှ ဖြတ်ပိုင်းသော် ထိုသစ်ပင်သည် အဘယ်အရပ်သို့လဲကျပေမည်နည်း၊ မဟာနာမ်-ထိုသစ်ပင်သည် အရှေ့အရပ်သို့သာလျှင် လဲကျမည် မဟုတ်လား။"
"မဟာနာမ်- ထိုဥပမာအတိုင်းပင်တည်း၊ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ နှစ်သက်သော သူတော်ကောင်းတရားနှင့် ပြည့်စုံ ထုံမွမ်းပြီးသူသည် နိဗ္ဗာန်သို့ ရှေ့ရှု ကိုင်းညွတ်သည်သာဖြစ်၏၊ ထို့ကြောင့် မဟာနာမ်- စိုးရိမ်ကြောငြ့်ကမဖြစ်ပါနှင့်၊ သင်၏သေခြင်းသည် ကောင်းသောသေခြင်း ဖြစ်လတ္တံ့၊ သင်၏ လားရာဂတိသည် မယုတ်ညံ့သော ဂတိ ဖြစ်လတ္တံ့" ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။
(စာရေးသူ=လေးမြိုင် စာအုပ်အမည်=ဗုဒ္ဓ၏ ၀ါဒစစ်ပွဲများ)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:26 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:20 AM0comments Links to this post
ဒီရက်ပိုင်းထဲ သတင်းတွေ နှင့် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာ Suicide သတင်းတွေ Hot ဖြစ်နေတာလိုက်ဖတ်ရင်း အတွေးတွေ ဘောင်ဘင်ခပ်မိတယ်။
ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာတော့ ဒီ case တွေက အမြဲလိုကြားနေရတော့ ရုတ်တရတ်တော့ သိပ်မထူးဆန်းသလိုပဲ။ နောက်မှ အော်...မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်က ဒါမျိုးလုပ်လိုက်တာ ဆိုတော့လည်း ဆိုပြီး အတွေးကို ပြင်လိုက်ရပါတယ်။
လူတွေ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သတ်သေကြတာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး၊ ရည်ရွယ်ချက်လည်း အမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်။ တချို့ လည်း စီးပွားရေးကြောင့်၊ တချို့ လည်း ဂုဏ်သိက္ခာကြောင့်၊ တချို့ လည်း ယုံကြည်ချက်ကြောင့်၊ တချို့ လည်း ကျန်းမာရေးကြောင့်၊ တချို့ လည်း အချစ်ရေးကြောင့်၊ တချို့ လည်း အိမ်ထောင်ရေးကြောင့် စသည်ဖြင့် အရွယ်အမျိုးမျိုးမှာ မတူညီတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ အမျိုးမျိုးနှင့် ဒီကိစ္စကို ပြုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တတ်ကြတယ်။
များသောအားဖြင့်တော့ Suicide လုပ်လိုက်ကြတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်တစ်ဦးတည်းရဲ့  စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုတည်းကိုပဲ ဦးစားပေးပြီး ဒီလိုလုပ်လိုက်ကြတာများပါတယ်။ အဲဒီ Suicide လုပ်တော့မယ့်အချိန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ရဲ့ ခံစားမှု Threshold ကို မကျော်လွှားနိုင်တော့တဲ့သဘောမျိုးလို့ အကြမ်းအားဖြင့်တော့ နားလည်မိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာကို လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးက ကန့်ကွက်ကြသလို ဘာသာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်လည်း မလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ ပြောဆိုထားကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လုပ်တဲ့သူတွေကတော့ လုပ်နေကြသလို နောင်လည်း လုပ်နေကြအုံးမှာပါဘဲ။ ဒါက အခုခေတ်မှာမှ ရှိခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုး ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှိနေခဲ့တဲ့ အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုး။
ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ရင်တော့ အခုလို Suicide လုပ်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်အစဉ်မှာ အကုသိုလ်အတွေးတွေကပဲ အားကြီးဦးစီးနေမှာသာဖြစ်လို့ သေခဲ့ရင်တော့ ဘ၀ကူးကောင်းဖို့ အခွင့်အလမ်း အတော်လေးကို နည်းတယ်လို့ ပြောရမှာပါဘဲ။ သူတို့ သေဖို့ ရည်ရွယ်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကလည်း အတ္တတွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီးမှ ဖြစ်တည်လာခဲ့တာမဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် လူတွေဆုတောင်းပေးနေသလို RIP ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လောက်ဖူးလို့ ထင်ပါတယ်။
အဲဒါနှင့် စပ်ဆက်ပြီး တွေးစရာတချို့ ခေါင်းထဲ ၀င်လာပါတယ်။
တချို့ တိုင်းပြည်တွေမှာ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုအတွက် အုပ်စုလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်းစီသော်လည်းကောင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေကြတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့အတွက်တော့ ဒါဟာ မွန်မြတ်သော သေဆုံးခြင်းလို့ ယူဆသွားကြမှာပါဘဲ။ သူတို့တွေ တကယ် RIP နိုင်ကြမလား။
တချို့ လူမျိုးတွေ Suicide Bombing တွေလုပ်ကြတယ်။ မိမိတို့ ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာတရားအတွက် မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်သွားကြတယ်။ သူတို့ရော ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။
တချို့ တိုင်းပြည်တွေမှာကျတော့ မိမိတို့မနှစ်မြို့ တဲ့ အုပ်ချုပ်သူခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ယောက်အတွက် မိမိအသက်ကို စတေးပြီး လုပ်ကြံမှုတွေလုပ်ကြတယ်။ ပုဂ္ဂလိကခံစားမှုမျိုးမဟုတ်ပဲ တကယ်ကို တိုင်းပြည်အတွက် မရှိသင့်တဲ့ ဆိုးရွားယုတ်မာတဲ့ အာဏာရှင်တစ်ဦးဦးအတွက် အခုလို အသက်နှင့်လဲပြီး ကြံစည်တာမျိုးဆိုရင်ရော လုပ်သင့်လား။ သူ့အတွက်ကော ဘ၀ကူးကောင်းနိုင်မလား။ သူ့လုပ်ရပ်က ပါရမီမြောက်တဲ့ လုပ်ရပ်လား။
ဂရိပညာရှိ Socrates ရဲ့  သေဆုံးမှုကို ဘယ်လိုပြောမလဲ။ သူ့အတွက်ပေးထားတဲ့ အဆိပ်ခွက်ကို အေးအေးဆေးဆေးသောက်ရင်း မိမိရဲ့ ယုံကြည်မှုအတွက် အသက်ကို စတေးသွားတယ်။ သူ့ရဲ့  Suicide လုပ်မှု (သေဖို့အတွက် ရွေးချယ်လိုက်မှု) ကို ကဲ့ရဲ့ ကြမှာလား။
ဘုရားရှင်လက်ထက်က ရဟန်းတော်တချို့  တရားဘာဝနာအားထုတ်ကြရင်း ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ငြီးငွေ့စိတ်ကုန်လာလို့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သေကြောင်းကြံစည်ကြသတဲ့။ တချို့ လည်း အဲဒီလို သတ်သေလို့ သေခါနီးဆဲဆဲမှာတင် ရဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်လို့ မှတ်သားဖူးတယ်။
ဘုရားရှင်လက်ထက်က သာကီဝင်မင်းတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ မဟာနာမ်မင်းအကြောင်းပါပဲ။ မဟာနာမ်မင်းဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်ကို နာရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သကဒါဂါမ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်အပေါ်မှာလည်း အထူးပဲ ကြည်ညိုတဲ့ မင်းတစ်ပါးပါ။ တစ်ချိန်မှာတော့ ၀ိဋဋူဘမင်းနှင့် စစ်ဖြစ်ရာမှာ စစ်ရှုံးပါတယ်။ ၀ိဋဋူဘက မဟာနာမ်မင်းကို မသတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မာနကြီးတဲ့ သာကီဝင်နွယ်ဖွား မဟာနာမ်မင်းဟာ အသက်ရှင်ရတာထက် သေရတာက မြတ်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ကိုယ့်ဖာသာ သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ဒီနေရာမှာ သေမှုမြောက်မမြောက်ကို မပြောလိုပေမယ့် ဘာလို့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က သေကြောင်းကြံစည်ရတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းက ကျွန်တော့်ကို အခုထိ အဖြေမပေးနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။
သူလို ပါရမီဘုန်းကံကြီးမားတဲ့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတောင်မှ သေကြောင်းကြံစည်သေးတယ်ဆိုရင် ခေတ်အဆက်ဆက်နှင့် ယခုခေတ်မှာ လူတွေ သေကြောင်းကြံနေကြတာ ဘာများပြောစရာရှိတော့မှာလဲလို့ အူကြောင်ကြောင် လျှောက်တွေးမိပါတယ်ခင်ဗျား။
၁၉၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၁။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:15 AM0comments Links to this post
သတိက အဆင်သင့်ရှိနေရင် မကျေနပ်တဲ့ စိတ်ကလေး ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ချက်ချင်းမြင်နိုင်တယ်။ ဒီစိတ်ကလေးဟာ မကျေနပ်တဲ့ အတွေးလေးပဲ၊ ဒေါသစိတ်ကလေးပါ၊ ငါမဟုတ်ဘူး၊ သူ့သဘာဝနဲ့သူပဲ၊ အဲဒီလို ဒေါသစိတ်ကို ငါမဟုတ်တဲ့ စိတ်အနေနဲ့ မြင်တတ်သွားပြီဆိုရင် ခွင့်လွတ်ရတာ ပိုလွယ်သွားတယ်။ အဲဒီဒေါသစိတ်ကို ငါ့စိတ်လို့ မြင်နေရင် ငါမကျေနပ်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးကြောင့် ငါကျေနပ်အောင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေ အများကြီး ဆက်တွေးရတော့တယ်။ ငါမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်လို့ရှိရင် ရှေ့ဆက်စရာ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီနေရာတင် ရပ်လို့ရတယ်။ ဇာတ်လမ်း မရှည်တော့ဘူး။
ကိလေသာ အကြောက်ဆုံးအရာက အနတ္တဉာဏ်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ကြည့်တာပဲ။ အေးအေးဆေးဆေးကြည့်နိုင်ရင် ကိလေသာဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ အင်မတန်ကောင်းတာကို တွေ့ရတယ်။ ကိလေသာဟာ မဟုတ်တာကို အဟုတ်လို့ ထင်အောင် အမျိုးမျိုး ဖန်တီးပြနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ပယ်ဖို့ထက် သိဖို့ ပိုအရေးကြီးတယ်။
ကိုယ့်မှာ ကိလေသာ ကင်းသလား၊ မကင်းဘူးလားဆိုတာ သူများကို သွားမမေးပါနဲ့၊ အချိန်တန်တော့ သူ့ဟာသူပြပါ လိမ့်မယ်နော်။ လောကဓံတရားက စာမေးပွဲစစ်ပေးမယ်။
ကိုယ့်မှာ ဣဿာမစ္ဆရိယဖြစ်တာကို ဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတာ အကျိုးအင်မတန်များပါတယ်နော်။ ကိုယ့်ချို့ယွင်းချက်ကို မသိဟန်ဆောင်ထားတာ ဖုံးထားတာဟာ အမှန်တော့ ကိုယ်ပဲ ထိခိုက်တယ်၊ နစ်နာတယ်။
လောဘဟာ ကလေးဆန်တယ်။ ဒေါသဟာ သိပ်ကလေးဆန်တယ်။ မာန ဣဿာ မစ္ဆရိယ စသည် သူတို့မရှိတဲ့အခါမှာ တကယ့်ကို ရင့်ကျက်မှု အပြည့်ရှိနေတာပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရင့်ကျက်မှုရှိလာအောင် တကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ လူကြီးဖြစ်လာအောင်ဆိုရင် သတိနဲ့နေမှ ဖြစ်တော့မှာ။
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန၊ မနာလိုဝန်တိုမှု၊ ယုံမှားသံသယဖြစ်မှု၊ စိတ်ပျံ့လွင့်မှု၊ ထိုင်းမှိုင်းတွေဝေမှု စတာတွေဟာ ရန်သူစိတ်တွေပဲ။ ကိလေသာအကြောက်ဆုံးဟာ သူ့ကို ရန်လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကိလေသာအကြောက်ဆုံးဟာ သူ့ကို သတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ကြည့်တာကို အကြောက်ဆုံးပဲ။
ကိလေသာရဲ့သဘောက ငါနဲ့ပေါင်းစပ်မိရင် အင်အားပိုပြီး ကြီးတတ်တယ်။ ကိလေသာဟာ အတ္တရဲ့အကူအညီကို မရရင် အားနဲသွားတယ်။ ဘယ်လိုကိလေသာဖြစ်ဖြစ်၊ လောဘဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါသဖြစ်ဖြစ်၊ မာနဖြစ်ဖြစ် ငါဆိုတဲ့ သက္ကာယဒိဋ္ဌိရဲ့ အထောက်အပံ့ကို မရရင် သူသိပ်အားမကြီးဘူး။ ဖြစ်ကြောလည်း မရှည်ဘူး။ မြန်မြန်နဲ့ပြေသွားတယ်။
ဒါကြောင့် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန၊ မနာလိုဝန်တိုမှုတွေကို အနတ္တအဖြစ်နဲ့မြင်ရင် သူအင်အားနဲပြီးတော့ နောက်ဆုတ် သွားမှာပါ။ ပြီးတော့ သူ့ဆီက ပညာနဲ့ အသိဉာဏ်လည်း ရလိုက်မယ်။ သူက ကိုယ့်ကို ပညာအသိဉာဏ်တွေ ပေးသွားတာပဲ။ ဒါကြောင့် စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာလာတယ်။ အတွင်းမှာ အင်အားတွေ ရှိလာတယ်။ အင်မတန် ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့သူ ဖြစ်လာတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အုတ်တွေ၊ ကျောက်တွေ၊ သံတွေနဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ ရဲတိုက်ကြီးကတော့ လူပုဂ္ဂိုလ်ကို ပြင်ပရန်သူကိုပဲ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်နော်၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲကို အမြဲဝင်နေတဲ့ ကိလေသာရန်သူကိုတော့ ၀င်မလာအောင် အကာအကွယ် မပေးနိုင်ပါဘူး။ ကိလေသာရန်သူ စိတ်ထဲကို ၀င်မလာအောင် သတိ၊ သမာဓိ၊ ဉာဏ်ပညာကသာ ကာကွယ်နိုင်တာပါ၊ ပြင်ပက ရန်သူထက် ကိလေသာရန်သူက ပိုကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။
သမထက စိတ်ကို တခြားအာရုံ မရောက်အောင် အတင်းချုပ်ထားတာ၊ ဖမ်းထားတာ၊ ထိန်းထားတာ၊ ထွက်မလာအောင် အပေါ်ကနေ ဖုံးထားတယ်။ ဖိထားတယ်။ ၀ိပဿနာက ဖုံးထား ဖိထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ၀ိပဿနာဘာဝနာက စိတ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ ကိလေသာရဲ့ သဘာဝကို နက်နက်နဲနဲ သိသွားပြီးတော့ အသိဉာဏ်နဲ့ ပယ်လိုက်တာ၊ အတွင်းကနေ သူ့ရဲ့အကြောင်းရင်းကို ကုလိုက်သလိုပဲ။ ကိလေသာကို အရင်းအမြစ်ကနေပြီးတော့ တစ်ခါတည်း ပယ်နိုင်အောင် အားထုတ်တဲ့ ဘာဝနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပိုပြီးတော့ နက်နဲတယ်။ ဉာဏ်အများကြီး ပါပါတယ်။
စိတ်ထဲမှာ လောဘဖြစ်တယ် ဆိုပါတော့၊ အဲဒီလောဘကို ဖိဖို့ ဖုံးထားဖို့ မကြိုးစားပဲနဲ့ အဲဒီလောဘရဲ့သဘာဝကို စိတ်ပါလက်ပါ စိတ်ရှည်လက်ရှည် သေသေချာချာ ကြည့်တာပဲ။ သေသေချာချာ ကြည့်ပါများရင် လောဘဖြစ်စရာ အာရုံတစ်ခုနဲ့ စိတ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အခါ လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ်။ ကိုယ်တိုင် သိရတယ်နော်။
အဲဒီလို ကြည့်တဲ့အခါမှာ အဲဒီလောဘဖြစ်တဲ့ စိတ်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားစရာ၊ အံ့သြစရာတစ်ခုအနေနဲ့ မြင်ရတယ်။ ငါ့စိတ်လည်း မဟုတ်တော့ဘူး။ စိတ်နဲ့အာရုံတစ်ခုနဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ ဖျတ်ကနဲ ပေါ်လာတဲ့ စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲ။ တော်တော်အံ့သြဖို့ကောင်းတယ်။ ငါ့စိတ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ကိုပဲ အနတ္တသဘော ဖြစ်သွားပြီနော်။ အနတ္တဥဉဏ်နဲ့ မြင်နိုင်မှသာ အမြင်မှန်တစ်ခုကို ရပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်။
လောဘကို ချက်ချင်း မပယ်နိုင်သေးဘူးနော်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ တရားကို အားထုတ်သွားတဲ့အခါမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စိတ်ထဲမှာ လောဘဖြစ်တဲ့အခါ သိတယ်။ ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါ သိတယ်။ မာနဖြစ်တဲ့အခါ သိတယ်။ ဣဿာမစ္ဆရိယဖြစ်တဲ့ အခါ သိတယ်။ ဒီလိုသိရင်းသိရင်းနဲ့ ဒီလိုသိတဲ့ အသိဉာဏ်ဟာ ကြာလေကြီးလေ ဖြစ်လာတယ်။ လောဘ၊ ဒေါသ မာနတွေ ကတော့ ချက်ချင်း မပျောက်သေးဘူးနော်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို သိတဲ့အသိဉာဏ်က ကြီးလာတယ်။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာ ပယ်ဖို့ထက် သိဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ် လို့ ပြောတာနော်။ အသိဉာဏ်ကြီးလာမှ အဲဒီအသိဉာဏ်က သူ့ဟာသူ ပယ်သင့်တဲ့ကိလေသာကို ပယ်တာပဲ။ ငါက ပယ်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် အတ္တနဲ့ ပယ်လို့ မရဘူး။ အနတ္တနဲ့မှပဲ ပယ်လို့ရတယ်။
အကြည့်ခံဖြစ်တဲ့ အာရုံကလည်း အနတ္တပဲ၊ ကြည့်နေတဲ့ စိတ်ကလည်း အနတ္တပဲ၊ နှစ်ခုစလုံး အနတ္တဖြစ်သွားတယ်။ အဲသလိုဖြစ်သွားရင် ဒီပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရတာ ပိုလွယ်သွားတယ်။
အားလုံးဟာ အနတ္တပါလားလို့ တကယ်မြင်ရင် ဘာရှေ့ဆက်စရာရှိသေးလဲ၊ ဘာမှ ဆက်စရာ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီမှာ လမ်းဆုံးသွားပြီ။ အားလုံးကိုသာ အနတ္တလို့မြင်ရင်၊ အားလုံးကိုသာ အနိစ္စလို့မြင်ရင် ရှေ့ဆက်စရာ ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ ဇာတ်လမ်းက အင်မတန်တိုတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွေရှည်နေကြတာဟာ အတ္တကြောင့်ပါ။
ခံစားချက်တစ်ခုခု၊ ဥပမာ-လောဘဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါသဖြစ်ဖြစ်၊ မာနဖြစ်ဖြစ်၊ မနာလိုဝန်တိုစိတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကြောက်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အားငယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ် အဖြစ်များလို့ရှိရင် အဲဒီခံစားချက်က စိတ်ထဲမှာ နေရာအပြည့် ယူထားလိုက်တယ်။ နေရာမဖယ် တော့ဘူး။ တွေးသမျှ အတွေးတွေဟာ အဲဒီနား ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ တွေးတော့တာပဲ။ ခံစားမှုတစ်ခုထဲမှာ ချောင်ပိတ်မိ နေတာဟာ ဘယ်လောက် ပင်ပန်းသလဲဆိုတာ သိကြပါတယ်။
သတိနဲ့နေတဲ့ အလေ့အကျင့်ကို လုပ်လာတဲ့အခါမှာ ပစ္စုပ္ပန် တကယ်တည့်သွားတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီချောင်ပိတ်မိနေတဲ့ စိတ်ဟာ မရှိတော့ဘူး။ ပစ္စုပ္ပန် တကယ်တည့်ပြီဆိုရင် ငါဆိုတာတောင် ပျောက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ သိတာပဲရှိတော့တယ်။ အဲဒီလို ငါဆိုတာပါ ပျောက်ပြီးတော့ သိတဲ့သဘောသက်သက် ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ကတည်ငြိမ်ပြီးတော့ အေးချမ်း နေတယ်။ လွတ်လပ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အတိတ်မရှိဘူး၊ အနာဂတ်မရှိဘူး၊ ငါမရှိတော့တဲ့ သတိ၊ သမာဓိမျိုးကြုံဖူးရင် ထွက်လမ်းကို သိပြီး ချောင်ပိတ်မိရင် ခဏပဲ။ ဒီနည်းကို မသိရင် ကိုယ့်အတွေးက ကိုယ့်ကို နှိပ်စက်တာကို ကောင်းကောင်း ခံရမယ်။
သိနေလို့ရှိရင် လုံးဝအတွေးအတော မရှိတော့တဲ့အခါမှာ ဒီလိုသိရတဲ့အာရုံကို ငါလို့မထင်တော့ဘူး။ ပထမတော့ ငါ့လက်ကပူနေတာလို့ ထင်တာ၊ ငါ၊ လက်၊ ပူ သုံးခုကို တွဲထားတာ။ နောင်သတိ အင်မတန်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာ လုံးဝ အတွေးအတောမရှိ၊ ပစ္စုပ္ပန်တကယ်တည့်တဲ့အချိန်မှာ ငါလည်း မဟုတ်တော့ဘူး။ လက်လည်း မဟုတ်တော့ဘူး။ ပူတာပဲ ရှိတော့တယ်။ ငါဆိုတဲ့ ပညတ် ကွာသွားပြီ။ လက်ဆိုတဲ့ ပညတ်လည်း ကွာသွားပြီ။ ပူတယ်ဆိုတဲ့ သဘာဝတစ်ခုကိုပဲ သိနေရတော့တာ။
အဲသလို ငါလည်းမဟုတ်၊ လက်လည်းမဟုတ်ပဲ ပူတာကို သိတဲ့အချိန်မှာ ပရမတ်ကို သိတယ်။ ပညတ် မပါတော့ဘူး။ ငါပူတာ မဟုတ်တော့ဘူး။ လက်ပူတာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ပူတာဟာ ပူတာပဲ။ ရုပ်အပေါ်မှာ ငါဆိုတဲ့ အထင်အမြင်မှားမှုဟာ ပျောက်သွားပြီ။
အဲဒီလို ပစ္စုပ္ပန် တကယ်တည့်တဲ့အချိန်၊ ပညတ်မပါပဲနဲ့ ပရမတ်ကို တကယ်သိတဲ့အချိန်မှာ အမှန်ကို သိတာပဲ။ အမြဲတမ်း ငါဆိုပြီးတော့ စွဲလာတဲ့ အစွဲကြီးဟာ အဲဒီအချိန်မှာ ခဏလောက် ပျောက်သွားတယ်။ သိတဲ့စိတ်ကလေး ရှိတယ်။ သိရတဲ့အာရုံရှိတယ်။ ကျန်တာဘာမှ မရှိတော့ဘူး။ အဲဒီလို အသိအမြင်ဟာ အင်မတန် ထူးဆန်းတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အသိဉာဏ်ဟာ အင်မတန် နက်နဲတယ်။ အာရုံက ရိုးတယ်၊ သိတာလည်းပဲ ရိုးရိုးလေးပဲ သိတယ်။ သို့သော်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အသိဉာဏ်က အင်မတန်ကြီးကျယ်တယ်။
အဲသလို ရိုးရိုးနဲ့ နက်နက်နဲနဲသိအောင် တရားအားထုတ်ရတာပဲ။ ဆန်းဆန်းပြားပြားသိဖို့ ကြိုးစားနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ သဘာဝကို အမှန်အတိုင်းသိဖို့ပဲ ကြည့်နေတာ။
အဲဒီလို ဘယ်အရာကို ကြည့်ကြည့် သဘာဝအဖြစ်နဲ့ပဲ မြင်တယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါအဖြစ်နဲ့ မမြင်တော့ဘူး။ အဲဒီဉာဏ်ဆိုတာ နဲနဲနောနော ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးနော်။ နာမ်ရုပ်ကို ကွဲကွဲပြားပြား ပိုင်းခြားပြီးတော့ သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီ။
အတွေးအခေါ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် နက်နက်နဲနဲတွေ ဖတ်ရှုနေအုံးတော့ ဒီလောက်နက်နဲတဲ့ ဉာဏ်မျိုး ရဖို့ရာ မလွယ်ဘူး။
အဲဒီဉာဏ်မျိုး ရတဲ့သူဟာ နဂိုတုန်းက သူသိထားတဲ့ အသိအမြင် အထင်မှားမှုတွေဟာ ပျောက်ကုန်တယ်။ သူ့ရဲ့စိတ်နေ စိတ်ထားပါ တစ်ခါတည်း ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အသိဉာဏ်ပါ ပြောင်းသွားတယ်။ စိတ်နေသဘောထား၊ အပြုအမူ၊ အသိအမြင် ပြောင်းလဲသွားတာ၊ ပြောင်းလဲတာမှ တကယ့်ကို သိသိသာသာကြီး ပြောင်းလဲသွားတာ။ ထိထိရောက်ရောက် ကြိုးစားလို့ရှိရင် အဲဒီလို ဉာဏ်မျိုးဖြစ်လာမယ်။ အဲဒီအနတ္တဉာဏ်က စိတ်ကို အင်မတန် ချမ်းသာစေတယ်နော်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ တည့်တည့်နေတဲ့အကျင့်က အမြတ်ဆုံးအကျင့်ပဲ။ အမြတ်ဆုံးဘ၀ပဲ။
ကြံစည်တွေးတောပြီးမှ သိလို့ရတဲ့အာရုံဟာ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့် အာရုံမဟုတ်ဘူး။ ပရမတ်လည်း မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ကူးနဲ့ သိလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် ပညတ်ပဲဖြစ်နေတယ်။ တွေးနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ စိတ်ကို တကယ်ထိပြီးတော့ သိနေတဲ့အချိန်မှာ ပရမတ် တည့်နေတာပဲ။
စိတ်ဟာ ပစ္စုပ္ပန်မှာ အနေများလာတဲ့အခါ ဘ၀ရဲ့ Quality ဟာ အင်မတန် မြင့်မားလာတယ်။ စိတ်ရဲ့ (Quality) အရည်အသွေးတွေဟာ မြင့်မားလာတယ်။ စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ လောဘ၊ ဒေါသတွေ၊ ပျံ့လွင့်မှုတွေ၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ တဖြည်းဖြည်း ရှင်းသွားတယ်။ သူတို့ ရှင်းသွားရင် စိတ်ရဲ့အရည်အသွေး ဘယ့်နှယ့်နေမလဲ။ မြင့်လာတယ်၊ အေးချမ်း တည်ငြိမ်မှု၊ သန့်ရှင်းမှု ရှိလာတယ်။
ဆရာတော် ဦးဇောတိက (မဟာမြိုင်တောရ)
Credit to: http://newworldnanda.ning.com/profiles/blogs/3451740:BlogPost:91736
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:22 AM0comments Links to this post
ပစ္စုပ္ပန်မှာ စိတ်ကိုထားတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် များလာရင် အဲဒီလူဟာ အပိုကိစ္စတွေကို လျှော့တတ်လာတယ်။ အပိုစကားပြောတာတွေ၊ အပိုခရီးသွားတာတွေ၊ အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ ထိုင်တွေးပြီင်္း ပူနေတာတွေလည်း လျှော့သွားတယ်။ စိတ်က ပိုရှင်းလာတဲ့အတွက် တစ်ခုခုကို လုပ်စရာရှိလို့ စဉ်းစားရမယ်ဆိုရင် သူသိပ်အချိန်ကြာကြာ စဉ်းစားမနေရဘူး။ ချီတုံချတုံဖြစ်ပြီး အချိန်ကုန်မသွားဘူး။
သတိရှိလို့ သမာဓိလည်း ကောင်းလာတဲ့အခါ၊ စိတ်လည်း ကြည်လင်အေးချမ်းလာတဲ့အခါမှာ လုပ်စရာကိစ္စ တစ်ခုခုရှိလို့ အေးအေးဆေးဆေး အာရုံပြုလိုက်ရင် ဘယ်ကိစ္စ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲဆိုတာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လျင်လျင်မြန်မြန် အဖြေထွက်လာတယ်။ အဲဒါကိုက အချိန်ကုန်တော်တော် သက်သာသွားတာ။
ခြေတစ်လှမ်း တစ်ချက်လောက် သိတယ်ဆိုရင်ကိုပဲ အင်မတန် အကျိုးများပါတယ်။ ဒါက လုပ်မကြည့်သေးဘဲနဲ့တော့ မသိဘူးနော်၊လုပ်ကြည့်လာတဲ့အခါကျမှ တကယ့်ကို အကျိုးများတာကို သိလာလိမ့်မယ်။
သာမန်အခြေအနေမှာ လူတွေဟာ တစ်ခုခု စိတ်ညစ်စရာ၊ စိတ်ပူစရာ၊ သဘောမကျစရာ၊ စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေ တွေးနေတတ်တယ်။ အရေးကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ အရေးမကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ တွေးနေတာပဲ။ သတိနဲ့သိပြီးတော့ သွားခြင်းအားဖြင့် အဲဒီအတွေးတွေဟာ နည်းနည်းတော့ လျော့သွားတယ်။ အတွေးနည်းနည်း လျော့သွားရင် စိတ်က နည်းနည်းကြည်လာတယ်။ စိတ်နည်းနည်း အေးချမ်းလာတယ်။ စိတ်မှာ ပင်ပန်းမှု နည်းနည်းလျော့သွားတယ်။
မိုးလင်းကတည်းက၊ အိပ်ရာနိုးကတည်းက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေ Mood ကို ပြုပြင်ထားရမယ်။ နိုးရင် နိုးနိုးချင်း တရားရှုမှတ်လိုက်ရင် သတိ၊ သမာဓိ ကောင်းလာပြီး စိတ်ကြည်လင် အေးချမ်းလာပြီးတော့ တည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့၊ အေးချမ်းတဲ့၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ Mood မျိုးရလာတယ်။ အဲဒီ Mood လေးကို အပျက်မခံဘဲ ထိန်းသွားရမယ်။
အဲဒီလို တစ်နေ့တာလုံး တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့၊ ခန့်ညားမှုရှိတဲ့၊ တည်ကြည်မှုရှိတဲ့၊ မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကို ထိန်းထားလို့ရှိရင် တရားထိုင်တဲ့အခါမှာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ သတိ၊ သမာဓိကို ရတယ်။
ညမှာ တရားအားထုတ်ပြီးမှ အိပ်လို့ရှိရင် မနက်နိုးတဲ့အခါမှာ ပိုပြီး ကြည်လင်လန်းဆန်းတယ်။ တရားအားထုတ်ဖို့လည်းပဲ ပိုပြီးတော့ စိတ်က သတိရတယ်။ လုံ့လ၀ီရိယ၊ သဒ္ဓါတရားလည်းပဲ ပိုပြီင်္းတော့ အားကောင်းလာတယ်။
အိပ်နေရင်းပဲ အသက်ရှုတာလေးကို သိပြီးတော့ နေလိုက်ပါ။ စိတ်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ဟိုကိစ္စ၊ ဒီကိစ္စ တွေးဦးမှာပဲ။ တွေးလိုက်ရင် တွေးတယ်ဆိုတာလေးကို စိတ်ကသိလိုက်ပါ။ သိပြီးရင် “ဘာမှ မထူးပါဘူး” ဆိုပြီးတော့ အသာလေး စိတ်ကို လျော့ချလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ပြန်ပြီးတော့ အသက်ရှုတာလေးကို သတိကပ်ပြီးတော့ ထားလိုက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲ ခြေတွေလက်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်အောင် လျှော့ပြီးတော့ ချထားပါ။ နေရာအနေအထားကိုလည်း အသက်သာဆုံး ဖြစ်သွားအောင် ပြင်လိုက်ပါ။ ခေါင်းအုံးကအစ နိမ့်လွန်းရင်လည်း မကောင်းဘူး။ မြင့်လွန်းရင်လည်း မကောင်းဘူး။ အဲသည်လို ကိုယ်နဲ့ အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်အောင် ပြုပြင်ထားပြီး အိပ်လျက်ကလေးပဲ တရားအားထုတ်ပါ။ ဒီလိုတရားအားထုတ်ရင်း၊ တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ပဲ အိပ်ပျော်သွားပါစေ…။
စာကျက်ခါနီးမှာ တရားထိုင်တယ်။ တရားထိုင်ပြီးမှ စာကျက်တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်တော့ စာတွေကို ပိုပြီးတော့ မှတ်မိတယ်။ ပိုပြီးတော့ သဘောပေါက်တယ်။ တော်တော်နဲ့ မမေ့ဘူး။ အိပ်ခါနီးမှာလည်း အိပ်ရာထဲမှာ တရားမှတ်ရင်းနဲ့ အိပ်တာပဲ။ စိတ်ထဲမှာလည်း ရှင်းသွားတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်း ရှင်းသွားပြီးတော့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း အိပ်ပျော်သွားတယ်။
တရားကတော့ အားထုတ်နေမှာပဲ။ ကိုယ်သိနိုင်တဲ့အကျိုးက ရနေတာကိုး။ အသိဥာဏ် ထက်တယ်။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်တယ်။ စိတ်ချမ်းသာတယ်။
ဘာမှမတွေးပဲနဲ့ ဒီလိုသိနေတဲ့အခါမှာ စိတ်က အင်မတန် အေးချမ်းနေတယ်။ တခြားနည်းနဲ့ပျော်မယ့်အစား အဲသလို တစ်နေရာမှာ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် အေးအေးကလေး နေပြီးတော့ တရားနဲ့ပဲ ပျော်လာတာပဲ။
စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ အသိဉာဏ်နက်နဲမှုဟာ အင်မတန် အရသာရှိတယ်။ အင်မတန် ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်။
တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ တကယ်ကို ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ရိုးရိုးသားသား စိတ်ရောကိုယ်ပါ လုပ်မှပဲ တကယ်ထိထိ ရောက်ရောက် တိုးတက်မှု ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီလိုမလုပ်ရင်တော့ နဲနဲပါးပါး အပေါ်ယံ သတိ၊ သမာဓိလောက် ရရင်ရမယ်။ တကယ်လေးနက်တဲ့ အဆင့်မြင့် သတိ၊ သမာဓိလောက်ပဲ ရရင်ရမယ်။ တကယ်လေးနက်တဲ့ အဆင့်မြင့် သတိ၊ သမာဓိ ဉာဏ်ပညာ မရနိုင်ပါဘူး။
သိနေတာကို သိနိုင်တဲ့သတိ ဖြစ်လာတော့ သိနေတာကို သိနေတဲ့အချိန်မှာမှ “ငါအခုမှ လူဖြစ်ပြီ” လို့ ခံစားလိုက်ရတယ်။
ဥပေက္ခာဝေဒနာဟာ မသိရင် မောဟဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောတော့ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဥပေက္ခာကို မသိရင် ဒုက္ခနဲ့တူတယ်တဲ့။ ဥပေက္ခာကို သိရင် သုခနဲ့ တူတယ်တဲ့။
ဥပေက္ခာက အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ သုခဘက်ကိုလည်း ပါတတ်တယ်။ ဒုက္ခဘက်ကိုလည်း ပါတတ်တယ်။ ဥပေက္ခာဝေဒနာကို များများသိအောင် လုပ်လို့ရှိရင် စိတ်က ပိုပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းလာတယ်။
သိပြီးတော့နေတဲ့ စိတ်ကလေးဟာ ငြိမ်းချမ်းနေတယ်၊ အဲဒီငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာ ညီမျှနေတယ်။ ဟိုဘက် မရောက်ဘူး။ ဒီဘက်လည်း မရောက်ဘူး။ ၀ီရိယ ပိုတယ်လည်း မရှိဘူး။ ၀ီရိယ လိုတယ်လည်း မရှိဘူး။ ၀ီရိယ ညီမျှနေတယ်။ အဲဒီလို ၀ီရိယ ညီမျှနေတာကိုလည်းပဲ ဥပေက္ခာလို့ပဲ ခေါ်တယ်။
အဲဒီလိုစိတ်ထဲမှာ အားလုံး ဥပေက္ခာဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့အခါမှာ ပထမတော့ ငါငြိမ်းချမ်းတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ငါပါနေတယ်နော်။ ဒီလိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ အားထုတ်သွား၊ အားထုတ်သွား၊ အားထုတ်သွား ကြာလာတဲ့အခါမှာ ငါမပါတော့ဘဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာပဲ ရှိတော့တယ်။
ငြိမ်းချမ်းမှုဟာ အနတ္တဖြစ်သွားပြီနော်။ ငါ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှု မဟုတ်ဘူး၊ ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု မဟုတ်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းမှု ဆိုတာ သဘာဝတရားတစ်ခုဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်သွားတယ်နော်။ အဲဒီလို ဥပေက္ခာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ငါတရားအားထုတ်နေရတယ်လို့တောင် မထင်တော့ဘူး။ သူ့အလိုလိုပဲ တရားအားထုတ်တာ ဖြစ်သွားနေတာ။ အဲဒီလို အခါမှာ အနတ္တကို ကောင်းကောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရတယ်။ အဲဒီတော့ ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့ အနတ္တကို သိရတယ်။ အနတ္တ လက္ခဏာကို သိရတယ်။
ဒီငြီမ်းချမ်းမှုဟာလည်းပဲ အမြဲတမ်းတော့ မရှိဘူး။ သူလည်း ပျက်ချင်တဲ့အခါ ပျက်သွားတာကိုး။ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ တောင်မှ တဆက်ထဲလို့ ပြောလို့မရဘူး။ တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုပဲ။ အဲသလို အားထုတ်သွားပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ အနတ္တ သဘောကို သိပြီးတော့ နေရင်းကလည်း နောက်ဆုံးမှာ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို ရနိုင်တယ်။
စိတ်က တခြားကို ပျံ့လွင့်သွားရင် အဲဒါကို သိလိုက်ပါ။ တခြားတစ်ခုခုကို တွေးနေပြီ။ သိလိုက်ပြီ။ သိပြီးရင် ညင်ညင်သာသာ စိတ်ကလေး နူးနူးညံ့ညံ့ကလေးနဲ့ နဂိုနေရာကို ပြန်ယူလာပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကိုပဲ ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ မကျေမနပ် မဖြစ်လိုက်ပါနဲ့။ ဒီစိတ်ကလည်း ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးပြန်ပြီပေါ့လို့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ ဒေါသ မဖြစ်ဖို့နော်။
လောဘအားကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ လောဘက သူလိုချင်တာ ရဖို့ပဲ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရရ ရရင်ပြီးရော။ ဒါကိုပဲ သူဆုံးဖြတ်မှာပဲ။
ဒေါသအားကြီးနေတဲ့အခါမှာ မကျေနပ်တဲ့စိတ် အားကြီးနေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့အတွက် ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ ဆိုတော့ သူတစ်ပါးကို ပြောရဆိုရဖို့၊ ရိုက်ရ နှက်ရဖို့၊ အပြစ်ဒဏ်ပေးရဖို့၊ နှိပ်စက်ရဖို့က အရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါဟာ တရားတယ်။ အဲဒါဟာ မျှတတယ်လို့ သူထင်မှာပဲ။ ဒါမှ လုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့ သူထင်မှာပဲ။
မာနဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုနေသလဲဆိုတော့ သူများထက် သာရဖို့ အရေးကြီးဆုံးပဲ။ တခြားကိစ္စတွေက အရေးမကြီးဘူး။
ထို့အတူ ဣဿာမစ္ဆရိယ စိတ်သဘောထားလည်း ဒီလိုပဲ။ မနာလိုတဲ့စိတ်၊ ၀န်တိုတဲ့စိတ် ရှိတယ်။ သူများ ကြီးပွားတာကို မလိုချင်ဘူး။ သူ မကြီးပွားသင့်ဘူးလို့ ယူဆတယ်။ “ငါပဲ ကြီးပွားသင့်တယ်” လို့ ထင်နေတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတာကို မျှပေးဖို့ စိတ်မကူးနိုင်ဘူး။
လူတွေရဲ့စိတ်မှာ လောဘဖြစ်လိုက်၊ ဒေါသဖြစ်လိုက်၊ မာနဖြစ်လိုက်၊ မနာလို ၀န်တိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်၊ တော်ကြာ လောဘပြန်ဖြစ်လိုက်၊ တော်ကြာမာနဖြစ်လိုက်၊ သတိမရှိတဲ့သူ၊ မောဟနဲ့ နေတဲ့သူဆိုရင် တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ တစ်လှည့်စီ ဖြစ်နေတာနော်။
စိတ်ရဲ့သဘာဝဟာ လောဘဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ လောဘကို ငါလို့ထင်တယ်။ လောဘကို ငါ့စိတ်လို့ ထင်တယ်။ လောဘက လိုချင်နေတာကို ငါလိုချင်တယ်လို့ထင်တယ်။ လောဘက တရားတယ်လို့ထင်ရင် ငါတရားတယ်လို့ပဲ ယူဆမှာပဲ။ ထို့အတူပဲ ဒေါသ၀င်လာတဲ့အခါမှာလည်း ဒေါသကို ငါလို့ ထင်နေတယ်။ ဒေါသက လုပ်ချင်တာကို အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။ အဲသလို ဖြစ်နေတာနော်။
ဒါပေမယ့် သတိနဲ့ ဥာဏ်နဲ့ ကြည့်တတ်တဲ့သူအဖို့ ဒီဒေါသ၊ လောဘဟာ ငါမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်လာတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ခိုင်းတိုင်း မလုပ်တော့ဘူး။ သူတို့ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကနေ လွတ်သွားတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်ကို စိတ်ဆိုးတယ်၊ မကျေနပ်ဘူး၊ သူက ငါ့ကို ဘယ်လိုပြောလို့ ငါက စိတ်ဆိုးတယ်လို့ ဇာတ်လမ်းကို စဉ်းစားမနေပဲနဲ့ စိတ်ဆိုးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲ ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို တွေးရင် စိတ်က ပိုပြီးတော့ ဆိုးလာတတ်တယ်။ ပိုပြီးတော့ စိတ်ဆင်းရဲသွားတတ်တယ်။ ဇာတ်လမ်းကို တွေးနေတာ မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ခံစားမှုကိုပဲ ကြည့်နေပါ.....။
Credit to: http://newworldnanda.ning.com/profiles/blogs/3451740:BlogPost:82168#comments
Posted by The Bliss Of Emancipation at 3:05 AM0comments Links to this post
တခါက ကျွန်တော့်အသိ ဘာသာရေးမိတ်ဆွေတစ်ယောက်က သူကိုးကွယ်တဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို သူ့ဇနီးသည်အကြောင်း သွားလျှောက်တယ်တဲ့။
ဘာလျှောက်သလဲဆိုတော့ “ဆရာတော်ဘုရား။ တပည့်တော်ရဲ့ ဇနီးက ည ည ဆို ဘုရားစင်ရှေ့ သွားပြီး တရားသွားထိုင်တယ်ဘုရား။ အပြင်မှာ ခြင်တွေက ဒီလောက်ကိုက်တာ။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အိပ်ယာပေါ်မှာ ခြင်ထောင်ထဲအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီး အားထုတ်ရင်လည်း ရတာပဲမဟုတ်လားဘုရား၊ တပည့်တော်ကတော့ ခြင်ကိုက်တော့မခံနိုင်ဘူး။ ခြင်ထောင်ထဲမှာပဲ တရားထိုင်တယ်ဘုရား။” လို့ လျှောက်တယ်။ ဒီတော့ ဆရာတော်ကြီးက “ဟဲ့...ဒကာ။ သူ့ ဖာသာ သူ့သဒ္ဓါနှင့် သူ လုပ်တာ။ သွားအပြစ်ပြောမနေနဲ့။ သူ ဘုရားစင်ရှေ့ အားထုတ်တာလည်း အပြစ်မဖြစ်ဘူး။ ဒကာ ခြင်ထောင်ထဲ အားထုတ်တာလည်း အပြစ်မဖြစ်ဘူး။ သူ့သဒ္ဓါတရားကို သွားကဲ့ရဲ့ တော့မှ ဒကာအပြစ်ဖြစ်မယ်။ သူ့အလုပ်သူလုပ်၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်။ အလကားနေရင်း အကုသိုလ်လိုက်မယူနဲ့ ။” တဲ့။
လူတွေမှာ စရိုက်အသီးသီးရှိကြတော့ သဒ္ဓါစရိုက်အားကြီးတဲ့လူတွေလည်း ကျွန်တော်တို့တွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့နေမြင်နေရတတ်ပါတယ်။ သဒ္ဓါအားကြီးတဲ့သူတွေမှာ များသောအားဖြင့်ကြည့်လိုက်ရင် တွေးတောဆင်ခြင်မှုအပိုင်း အားနည်းနေတတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာ သဒ္ဓါစရိုက်အားကြီးတဲ့သူတွေကလည်း များတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မျက်ကန်းယုံကြည်မှု ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဖြစ်လာတာပါဘဲ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ ကာလာမသုတ် ကိုဟောပြီး အရာရာကို အတည်မယူဖို့၊ သေသေချာချာလေ့လာဆန်းစစ်ပြီး တကယ်အကျိုးရှိပြီ၊ ဟုတ်မှန်ပြီဆိုမှ ယုံကြည်လက်ခံဖို့ ဟောခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒီသုတ်တော်ဟာ သဒ္ဓါစရိုက်သမားတွေအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပြီး ဟောခဲ့တဲ့ တရားအမျိုးအစား မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။
တခြားသော အယူဝါဒတွေကို မျက်ကန်းယုံကြည်တာ၊ သဒ္ဓါလွန်တာတွေထက်စာရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ အယုံအကြည်လွန်တာက အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် အကျိုးတော့ မယုတ်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အကုသိုလ်မဖြစ်ပဲ ကုသိုလ်တွေသာ ဖြစ်စေမှာမို့လို့ပါ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ အသိဉာဏ်တွေ တစတစရင့်ကျက်လာပြီး အဆုံးစွန်မှာတော့ ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ကနေလွတ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို ရောက်အောင် လမ်းပြသွန်သင်ခဲ့၊ သွားစေချင်ခဲ့ပေမယ့်လို့ လောလောဆယ် လူတွေ အဲလောက်ထိ ရောက်အောင် မလုပ်နိုင်သေးရင်တောင် အကုသိုလ်မဖြစ်ပဲ၊ ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတာပါပဲလေ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေ သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးပါးကို အကြည်ညိုလွန်တာတို့၊ ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်အပျက်တွေမှာ စိတ်ဝင်စားကြတာ၊ အယုံအကြည်လွန်တာမျိုးတွေ တွေ့ရရင် ခုန အပေါ်က ဆရာတော်ကြီး ဆုံးမသလို သူများသဒ္ဓါတရားကို မကဲ့ရဲ့ မိအောင် အထူးသတိထားပြီး ကိုယ့်အလုပ်သာ ကိုယ်ဆက်လုပ်ဖို့ နှလုံးသွင်းမိပါကြောင်းခင်ဗျား။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:39 AM0comments Links to this post
စိတ်ထဲ ရိပ်ခနဲ လင်းလက်သွားတဲ့ အလင်းရောင်လေးတွေ အကြောင်း
The foolish call for the unchangeable past,
While life walks toward the future;
They simply lose their present and future.
(Chai Na Pol Akarasupaset)
လူမိုက်တွေဟာ ပြောင်းလဲပစ်လို့မရနိုင်တဲ့ (ပြန်မရနိုင်တဲ့) အတိတ်ကို တမ်းတတတ်ကြတယ်။ သူတို့ အဲဒီလိုတမ်းတနေချိန်မှာပဲ သူတို့ရဲ့ဘ၀ဟာ အနာဂတ်ကို ဦးတည်လျှောက်လှမ်းသွားနေတယ် ဆိုတာ သူတို့မသိကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့ လူမိုက်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀နဲ့ အနာဂတ်တွေကို အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနေကြတာပဲပေါ့။
အပိုင်း - ၁
ပစ္စုပ္ပန်မှာ အာရုံနဲ့စိတ် အဆင်ပြေအောင်နေ
စာအုပ်စင်မှာရှိတဲ့ စာအုပ်တွေအများကြီးထဲက ဒီစာအုပ်ကလေးကိုတော့ ခဏခဏဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ဖြစ်တိုင်းလည်း ဓမ္မနဲ့ဆိုင်တဲ့ အတွေးအမျှင်တွေက ရင်ထဲမှာ ဖွဲ့သီလာတတ်ပါတယ်။
စာအုပ်အမည်က The Foolish, The Clever, The Wise ပါ။ မူရင်းစာရင်း စာရေးဆရာကတော့ Chai Na Pol Akarasupaset တဲ့။ ဒီစာအုပ်ကို မြန်မာပြည်က စာရေးဆရာ လွတ်လပ်အိမ်က ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ လူမိုက်၊ လူလိမ္မာနှင့် ပညာရှိလို့ အမည်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်ကလေးက အတွဲ(၂)တွဲတောင် ထုတ်ဝေပြီးပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ကြည့်ရတာ ဒီစာအုပ်ကလေးကို အားပေးတဲ့သူ နည်းလေသလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ခဏခဏရိုက်ရလွန်းလို့ ကုန်သွားလေသလား မသိနိုင်ပါဘူး။ စာအုပ်ဆိုင်တွေဘက် လှည့်ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဒီစာအုပ်ကို အတွေ့ရနည်းပြီး အတွေ့ကျဲနေတတ်လို့ပါ။
ထားပါတော့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အရေးကြီးတာက ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ။ ဒီတော့ကာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ရင်ထဲကို ထိရှသွားသမျှတွေကို ရေးပြချင်ပါတယ်။
ဒီစာပိုဒ်တွေကို ဖတ်ရင်းက ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုလူစားမျိုးထဲမှာ ပါနေသလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ဆန်းစစ်ကြည့်မိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုးရိုးသားသား အမှတ်ပေးကြည့်မိတော့ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်စိတ်ဟာ The Foolish (လူမိုက်) အုပ်စုထဲမှာ ရောက်နေတတ်ပြီး တစ်ခါတလေမှာတော့လည်း The Clever (လူလိမ္မာ) ထဲ ရောက်ချင်ရောက်နေပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မူရင်းစာရေးဆရာ ညွှန်းဆိုထားတဲ့ The Wise (ပညာရှိ) အုပ်စုထဲရောက်ဖို့တော့ အတော်ကြိုးစားရဦးမှာပါလား ဆိုတာကိုလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်နေမိပြန်ပါတယ်။
လောကမှာ လူသားတွေအားလုံး တစ်နေ့တာဆိုတဲ့ နေထွက် နေ၀င် အချိန်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကို ပြိုင်တူရကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကို အသုံးချပုံချင်းကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လည်း အချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့ စာရေးဆရာက အုပ်စုသုံးစု ခွဲလိုက်ဟန်တူပါရဲ့။
လူမိုက်တွေဟာ ပြောင်းလဲပစ်လို့မရနိုင်တဲ့ (ပြန်မရနိုင်တဲ့) အတိတ်ကို တမ်းတတတ်ကြတယ်။ သူတို့ အဲဒီလိုတမ်းတနေချိန်မှာပဲ သူတို့ရဲ့ဘ၀ဟာ အနာဂတ်ကို ဦးတည်လျှောက်လှမ်းသွားနေတယ် ဆိုတာ သူတို့မသိကြဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ လူမိုက်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀နဲ့ အနာဂတ်တွေကို အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးနေကြတာပဲပေါ့။
သေချာပါပြီ။ ဒီစာပိုဒ်ကို ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကို ကိုယ့်စိတ်ဟာ The foolish (လူမိုက်) အုပ်စုဝင် ဖြစ်မှန်းမသိ၊ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါရဲ့။ ကျန်တဲ့အချိန် အသာထား။ တရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာ ပိုသိသာတယ်။ စိတ်ဟာ ပစ္စုပ္ပန်တည့်ဖို့ ပေးထားတဲ့အာရုံဖြစ်တဲ့ ၀င်လေ ထွက်လေအပေါ်မှာ ကြာကြာ နေလေ့မရှိဘူး။ အတိတ်မှာ ကျက်စားခဲ့တဲ့ အာရုံတွေဆီကို ပြန်ပြန်ရောက်သွားတာ။ ပစ္စုပ္ပန်အာရုံနဲ့ နေနိုင်ဖို့အတွက် မနည်းကြိုးစားရတယ်။ ၀ီရိယကို တွန်းတင်ပေးရတယ်။
“ပါသ္မိံရမတိ မနော” ဆိုတဲ့အတိုင်း စိတ်ဟာ မကောင်းမှုမှာ မွေ့လျော်တတ်တော့ သတိမပါ၊ ဉာဏ်မပါဘဲ ကျက်စားပျော်ပါးခဲ့တဲ့ အာရုံအဟောင်းတွေဆီကိုပဲ တ၀ဲဝဲရယ်တဲ့ တလည်လည် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အညစ်အကြေးစွန်းထင်းခဲ့တဲ့ အာရုံတွေကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပစ်နေတဲ့ ၀င်လေထွက်လေကို ရှုမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ပစ္စုပ္ပန်အာရုံကို ဆုံးရှုံးသွားရပါတော့တယ်။ အာရုံအညစ်အကြေးတွေကို ဆေးကြောဖို့ရာ မလုပ်ဖြစ်တော့ အနာဂတ်မှာ ရလာမယ့် ရှင်းသန့်တဲ့အာရုံ သက်သက်နဲ့ ထိတွေ့ဖို့ရာ အခွင့်အလမ်း နည်းသွားပြီပေါ့။
ဒါကြောင့်မို့ စာရေးဆရာကပြောတာပေါ့။ လူမိုက်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်ကို လွယ်လွယ်ကလေး ဆုံးရှုံးကြတယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ မှန်လိုက်လေပေါ့နော်။
ရှေ့တစ်ဆင့် တိုးကြည့်ရအောင် -
The clever dream of the unreal future, while life need something to live with now. They are usually dissatisfied with the present.
လူလိမ္မာတွေဟာ ဖြစ်မလာသေးတဲ့ အနာဂတ်ကို အိပ်မက် မက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ ဘ၀ရဲ့လိုအပ်ချက်က ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အတူနေဖို့ပါ။ သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကို အမြဲမကျေနပ်ဘူး ဖြစ်နေကြတယ်။
စိတ်နဲ့ ပစ္စုပ္ပန်အာရုံနဲ့ တည့်ဖို့ဟာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ ဆိုတာကြည့်နော်။ လူလိမ္မာလို့ အခေါ်ခံရသူတွေတောင် သတိလက်လွတ် ဖြစ်တတ်ကြတာကို စာရေးဆရာက ထောက်ပြထားတာ။
လူမိုက်တွေက အတိတ်ကို တမ်းတနေတဲ့အချိန်မှာ လူလိမ္မာတွေဟာလည်း မရောက်သေးတဲ့ အနာဂတ်ကို အိပ်မက် မက်တတ်ကြတယ်။ အနာဂတ်ကို အိပ်မက် မက်နေပြီဆိုကတည်းက ပစ္စုပ္ပန်အာရုံပေါ်မှာ စိတ်ကိုတည့်အောင် မထားနိုင်တော့ဘူးပေါ့။
ဒီတော့ ဘာဖြစ်သလဲ။ သူတို့အိပ်မက်ထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း အနာဂတ်ကာလကို မရောက်မချင်း ရင်မောနေရတော့တာပေါ့။ အနာဂတ်ဆိုတာ တစ်ချိန်မှာ ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လာမှာပါ။ ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လာမှာချင်း အတူတူ လက်ရှိရထားတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကာလကိုပဲ အကောင်းဆုံးတည်ဆောက် လေ့ကျင့်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ချင်းဆက်သွားလို့ အနာဂတ် ရောက်သွားတယ်ဆိုရင် အိပ်မက်တွေဟာ လက်တွေ့ဘ၀ ဖြစ်လာမှာပါ။
သို့မဟုတ်ရင်တော့ ငါလိုချင်တဲ့ အနာဂတ် ရောက်မလာသေးဘူး။ ငါဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ အနာဂတ် မရောက်သေးဘူးနဲ့ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ကို မကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ အမြဲရင်ဆိုင်နေကြမှာပါ။
ဒါဆိုရင် မရနိုင်တော့တဲ့ အတိတ်နဲ့ မရောက်သေးတဲ့ အနာဂတ်ရဲ့ သဘောသဘာဝတွေကို နားလည်ထားတဲ့ The Wise (ပညာရှိ)တွေရဲ့ နှလုံးသွင်းတတ်ပုံကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင် -
The wise stand in the real present, stretch the past, present and future into direction.
Their lives are powerful and directed towards success.
ပညာရှိကတော့ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာပဲ နေရတယ်။
အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်တို့ကို လားရာတစ်ခုဆီ ဦးတည်ထားတယ်။
သူတို့ရဲ့ဘ၀ဟာ စွမ်းအားတွေရှိပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိတယ်။
ဆိုလိုတာက အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ အနာဂတ်ဆိုတဲ့ ကာလပညတ်ကို နှလုံးမသွင်းတော့ဘူး။ ပေါ်ဆဲအာရုံပေါ်မှာပဲ စိတ်ကို တည့်အောင်ထားတယ်။ ပေါ်ဆဲအာရုံပေါ်မှာ စိတ်ကို တည့်အောင်ထားတော့ ဘာတွေ့ရမှာတုံးလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ မေးစရာရှိရင် အဖြေလည်း ရှိရမှာပေါ့။ ပေါ်ဆဲအာရုံမှာသာ စိတ်ကို တည့်အောင်ထားကြည့်။ အာရုံရဲ့ မမြဲတဲ့သဘာဝကို ဉာဏ်က သိလာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီတော့ မမြဲတဲ့သဘာဝကို သိပြီဆိုရင် ဘာကို စွဲလမ်းတပ်မက်နေဦးတော့မှာလဲ။ စွဲလမ်းတပ်မက်မှုကင်းတဲ့စိတ်ဟာ စွမ်းအားတွေ ပြည့်လာတယ်။ ခွန်အားသစ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ရဲ့ ဘ၀ဟာ အောင်မြင်ပြီပေါ့။ အောင်မြင်မှုတွေထဲမှာ အဆင့်အမြင့်ဆုံးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောင်နိုင်ခြင်းပါပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ကို အစိုးရ အောင်နိုင်ခြင်းဟာ အဆင့်အမြင့်ဆုံး အောင်မြင်မှုပါပဲ။
ဒါကြောင့် တိပိဋကဓရ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ ‘လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ(လက်ငင်းအချိန်)ကို နိဗ္ဗာန်အထိ အကျိုးရှိအောင် အသုံးချပါ’ ဆိုတဲ့ အဆုံးအမအတိုင်း ပစ္စုပ္ပန်မှာ အာရုံနဲ့ စိတ် တည့်အောင်၊ အဆင်ပြေအောင် နေနိုင်ရင်ဖြင့် လူမိုက်၊ လူလိမ္မာတွေဘ၀က လွန်မြောက်ပြီး ပညာရှိ (The Wise) ဘ၀ကို ရောက်နိုင်မယ့်အကြောင်း၊ ဓမ္မအတွေးစတစ်ခုကို ရေးပြလိုက်ရတာပါ။
အုံလိုက် ကျင်းလိုက် တိုးဝှေ့ပြီး
လွတ်မြောက်ချင်ရင် . . . . .
ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားအဆူဆူရဲ့ အဆုံးအမပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၂)နှစ်ကျော်က မိုင်းပြင်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဏလျှံတောင်ပေါ်မှာ ဒီအဆုံးအမစကားကို ဆရာအရှင်ရဲ့ နှုတ်ဖျားကတစ်ဆင့် ပြန်ကြားခဲ့ပုံကို ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီအဆုံးအမ စကားလုံးတွေဟာ ရင်ထဲကို တရားသားအဖြစ် စီးဝင်သွားခဲ့လို့ပါ။
အဲဒီကစလို့ ဘ၀အမြင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အတိတ်ကအရိပ်တွေကိုလည်း မကြာခဏ အမှတ်ရဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ(၁၂)နှစ်ရဲ့ ရှေ့ကာလတွေတုန်းကဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သလဲ။
စာရေးဆရာ Chai Na Pol Akarasupaset ရဲ့ Dealing with Badness (မကောင်းမှုကို ဖြေရှင်းခြင်း) စာပိုဒ်ထဲက The Foolish တွေရဲ့ သဘောထားနဲ့ တစ်ထပ်တည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ၀န်ခံချင်ပါတယ်။
The foolish perform one bad deed to get rid of Badness, which doubles their troubles.
လူမိုက်တွေဟာ မကောင်းတာတစ်ခုကို မကောင်းမှုနဲ့ပဲ ဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းသည်ပင်လျှင် သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကို နှစ်ဆတိုးပွား လာစေပါတယ်။
အခြေခံအကျဆုံး ဥပမာပေးရရင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆိုပြီး ကွမ်းကိုစားတယ်။ ကြာတော့ ဆေးလိပ်ရော၊ ကွမ်းရော စွဲသွားပါလေရော။ အရက်ဖြတ်ဖို့ဆိုပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး ဆေးပြားတွေသုံးတယ်။ အနံ့မနံတော့ လူကြားထဲမှာလည်း အမူးသမားလို့ အထင်မခံရဘူးပေါ့။ နောက်တော့လည်း အဲဒီဆေးပြားတွေရဲ့ဒဏ်ကို အပြင်းအထန် ခံရပြီး အသက်ပေးသွားခဲ့ကြသူတွေလည်း တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကိုယ် စလုပ်ထားတဲ့အကျင့်ဆိုးက ကိုယ့်ကို ဒုက္ခဖြစ်စေတာကို မရိပ်မိတော့ နောက်ဒုက္ခ တစ်ခုနဲ့ အစားထိုးတဲ့အခါ ဒုက္ခနှစ်ဆပွားပြီး အသက်ပါ ပေးလိုက်ရတာပေါ့။
ဒါက အကျင့်ဆိုးကို ကျင့်မိလို့ ဒုက္ခနှစ်ဆပွားတာ။
စိတ်ဆိုး စိတ်ညစ်ကို မွေးမိလို့ ဒုက္ခနှစ်ဆပွားတာကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မျှဉ်းပြီး သတ်နေသလိုပါပဲ။
ဆိုပါတော့။ စီးပွားရှာတဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အနုပညာနယ်ပယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာရေးနယ်ပယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နယ်ပယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နယ်ပယ်မှာမဆို အောင်မြင်မှုအထွတ်အထိပ်ဆိုတာက တစ်နေရာတည်းရယ်။ ဒီ အမြင့်ဆုံးကနေရာကိုရဖို့ အုံလိုက် ကျင်းလိုက် တိုးဝှေ့ပြီး အပေါ်မရောက် ရောက်အောင် တက်နေကြတဲ့ မြင်ကွင်းက ရင်မောစရာပါ။
ကိုယ့်ရှေ့မှာ ရောက်နေသူရဲ့ ခြေထောက်ကို ဆွဲချ။ ကိုယ့်နောက်က တက်လာမယ့်သူရဲ့ ခေါင်းကို နင်းချနဲ့ဆိုတော့ လိုချင်တာ တစ်ခုကြောင့် မလိုချင်တာတွေကို ဖယ်ရှားပစ်နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေက မနည်းပါလား။ လိုချင်တာက လောဘ၊ လောဘစေတသိက်ဟာ အကုသိုလ် စေတသိက်၊ တနည်းအားဖြင့် မကောင်းမှု။ အဲဒီလောဘကြောင့် ဒေါသဖြစ်။ ဒေါသက မလိုချင်တာ။ ဒါလည်း အကုသိုလ် စေတသိက်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မကောင်းမှုပေပဲ။
ဒါကြောင့် စာရေးဆရာက ပြောတာပေါ့။ လူမိုက်တွေဟာ မကောင်းတာတစ်ခုကို မကောင်းမှုနဲ့ဘဲ ဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးစားတယ်တဲ့။ အဲဒါဟာ သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကိုပဲ နှစ်ဆတိုးပွားစေတယ် ဆိုတာလေ။ မှန်လိုက်တာနော်။
လူမိုက်တွေထက်စာရင် အသိဉာဏ်နည်းနည်း အဆင့်မြင့်လာသူတွေကိုတော့ လူလိမ္မာလို့ ခေါ်ကြတာပေါ့။ လူလိမ္မာတွေဟာ အသိဉာဏ်လေးရှိတော့ လူမိုက်တွေလိုတော့ မကောင်းမှုနဲ့ မပျော်ပိုက်ဘူးပေါ့။ ပြီးတော့ မကောင်းမှုကိုလည်း ကောင်းမှုနဲ့ အစားထိုးတတ်ကြတယ်လေ။ ဒါကလည်း ဆရာသမားတွေရဲ့ အဆုံးအမကို ရထားကြလို့ပေါ့။ ဒါကို စာရေးဆရာက လူလိမ္မာ (The Clever) တွေရဲ့ မကောင်းမှုဖြေရှင်းပုံကို ဒီလို ရေးသားထားလေရဲ့။
The clever perform goodness to get rid of one badness, which creates uncountable conflicts of dualism.
လူလိမ္မာက မကောင်းတာကိုဖယ်ရှားဖို့ ကောင်းမှုကို ပြုလုပ်ပေမယ့် ကောင်းမှုနဲ့ မကောင်းမှုတို့ရဲ့ကြားမှာ မရေတွက်နိုင်တဲ့ ပဋိပက္ခကို ဖန်တီးမိတယ်တဲ့။
မကောင်းတာကို မလုပ်ဘူး။ ကောင်းတာကို လုပ်ဖြစ်သွားပြီ ဆိုတာကတော့ ၀မ်းသာစရာပါ။ အကျင့်ပြောင်းသွားပြီကိုး။ အကျင့်ဆိုးကို ပစ်ပယ်ပြီး အကျင့်ကောင်းကို ကျင့်ဖြစ်တာကတော့ မင်္ဂလာပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လို အကောင်းဘက်ကို ပြောင်းမလာသေးတဲ့သူတွေ အပေါ်တော့ အပြစ်မြင်တတ်ကြသေးတယ်။ ငါကောင်းပြီ၊ သူတို့ မကောင်းကြသေးဘူးပေါ့။ မကောင်းသေးတဲ့ သူတွေကိုပဲ သနားစရာလိုလိုနဲ့ အပေါ်စီးက ငုံ့ကြည့်တတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါကိုက ကောင်းတာမှာ ‘ငါ’ ကပ်ပြီး ငါကောင်းတာ၊ ငါ့ကောင်းမှုဆိုပြီး ပြန်စွဲလမ်းနေတော့ မာနက စိတ်ထဲ နေရာယူလို့ ရသွားပြီပေါ့။
ကောင်းမှုကုသိုလ်ကို ဓမ္မလို့မမြင်ဘဲ ‘ငါ’ တပ်ပြီး စွဲလမ်းလိုက်တော့ အမြင်မှားဒိဋ္ဌိဝင်ပြီလေ။ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ ကုသိုလ်အပေါ် နှစ်သက်နေတာ၊ သာယာနေတာတွေဟာလည်း ရပ်တန့်မှုတစ်မျိုးပါပဲ။ အမှန်တော့ ကုသိုလ်အထောက်အပံ့ကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အေးချမ်းမှု၊ တည်ငြိမ်မှုတွေကို အရင်းပြုပြီး လွတ်မြောက်မှုလမ်းစကို ရှာရမှာ။
ဒါကြောင့် စာရေးဆရာက ကောင်းမှုနဲ့ မကောင်းမှုကြားမှာ ဗျာများနေတတ်တဲ့ လူလိမ္မာတွေရဲ့ ရင်ထဲက ပဋိပက္ခကို အမိအရ ဖော်ကျူးထားတာ . . . ဒါဖြင့်ရင် စာရေးဆရာက ဘာကို ဆက်ပြောချင်တာလဲ။ ဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုတည်း အောက်မှာပဲ အမြင်ချင်းမတူတဲ့ ပညာရှိ (The Wise) တွေရဲ့ အမြင်ရှင်းပုံကို ဒီလိုရေးဖွဲ့ထားပြန်ပါတယ်။
The wise liberate themselves from all badness and goodness, which brings about eternal liberty after tiresome work.
ပညာရှိကတော့ သူတို့ကိုယ်ကို မကောင်းမှု၊ ကောင်းမှုကနေ လွတ်မြောက်အောင်နေတယ်။ ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာ အလုပ်တွေရဲ့နောက်က ထာဝရ လွတ်မြောက်မှုကို ဆောင်ယူတယ်။
ဟုတ်တယ်။ ပညာရှိစာရင်းဝင်သွားတဲ့ ဉာဏ်ကြီးသူတွေကတော့ အကုသိုလ်အလုပ်တွေကို လုံးဝ မလုပ်တော့တာ အသေအချာပါပဲ။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုတော့ သူတို့လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ့ကုသိုလ်လို့ မစွဲလန်းတော့ပါဘူး။ ကုသိုလ်ရဲ့ရှေ့မှာ ‘ငါ’ မတပ်တော့ဘူး။ ငါလုပ်တာပေါ့လို့လည်း မာန မထောင်တော့ဘူး။ ဒီတော့ကာ သူတို့ဟာ ကုသိုလ်တရားကနေ ထပ်မံလွတ်မြောက်သွားတာပေါ့။
“ပြုပြင်စီရင်အပ်တဲ့ သင်္ခါရတရားမှန်သမျှ ပျက်စီးတတ်တဲ့ သဘောရှိကုန်သည်။ မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆသော သတိတရားနဲ့ နေရစ်ကြကုန်လော့” ဆိုတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ နောက်ဆုံးမိန့်မှာချက်နဲ့ တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်သွားတော့တယ်။
သင်္ခါရမှန်သမျှ ပျက်စီးတတ်တာကို ဉာဏ်ကြီးတဲ့ ပညာရှိတွေက သိပြီးသားဖြစ်နေတော့ ကုသိုလ်သင်္ခါရကို ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်း မရှိတော့ဘူး။ (အကုသိုလ်ကတော့ လွှင့်ပစ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ)။ ဒါကြောင့် လက်လွှတ်လိုက်တယ်။ လက်လွှတ်လိုက်တော့ ဘာဖြစ်သလဲ။ သင်္ခါရ နယ်ပယ်က လွတ်မြောက်သွားပြီး အသင်္ခါရနယ်ပယ်ကို ကူးသွားပြီ။ ပြုပြင်စီရင်ခြင်းမရှိတဲ့ နယ်ပယ်ကို ရောက်သွားပြီ။ ထာဝရ လွတ်မြောက်သွားပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ ပြုပြင်စီရင်အပ်တဲ့ သင်္ခါရတရားထဲမှာ အကျုံးဝင်နေတဲ့ ကုသိုလ်တရားကိုပင် ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာလို့မြင်နေပြီ။ ပျက်ခြင်းရဲ့ အနိစ္စတရားကို နားလည်သူဟာ ဖြစ်ခြင်းရဲ့ ဒုက္ခကိုပါ တွဲမြင်သွားပြီ။
ပညာရှိတွေရဲ့ လွတ်မြောက်အောင်နေတတ်တဲ့ စိတ်ရဲ့ အခြေအနေသဘာဝကို ရေးဖွဲ့တင်ပြနိုင်တဲ့ မူရင်းစာရေးဆရာကိုလည်း စိတ်ထဲကနေ တလေးတစား ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ အားကျလိုက်မိပါရဲ့။
ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံမှုတွေကြောင့်
စိတ်ထားသန့်စင် ရှုမြင်လျှင် . . .
ငယ်ငယ်တုန်းက သိပ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
“လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာ အဲဒီလူ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ခေတ်ကာလကြီးက သူ့ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်ကို သူ ဘယ်လောက်အထိ ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ တိုင်းတာရမှာပဲ”
စာရေးဆရာကြီး ဗန်းမော်တင်အောင် ပြောခဲ့တဲ့ စကားပါ။ ဒီစကားက ရင်ကြားထဲ စိမ့်ဝင်သွားတော့ လူငယ်သဘာဝ သမိုင်းပေး တာဝန်ဆိုတာကို နိုင်သလောက် ထမ်းကြည့်ချင်စိတ် ပြင်းထန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးရတာ လွယ်သလောက် လက်တွေ့ဘ၀မှာ ရုန်းကန်ရတာ ခက်ခဲလှပါတယ်။
နောက်တော့ အသက်အရွယ်က ကြီးလာ၊ အတွေ့အကြုံက အသင့်အတင့် ရလာတဲ့အချိန်မှာ ဆရာဗန်းမော်တင်အောင်ရဲ့ နောက်ထပ်စကားတစ်ခွန်းကိုပဲ ပြန်ကိုးကားပြီး လောကကြီးကို ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်ုပ်ကရော နောက်ထပ် ဘာများ တတ်နိုင်ပါဦးတော့မည်နည်း”
အတွေ့အကြုံရေစီးကြောင်းပေါ်မှာ တွေ့ခဲ့ရသမျှလူတွေကို ပြန်သတိရဖြစ်တဲ့အခါ လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကို တိုင်းတာဆုံးဖြတ်တဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်အပြုအမူ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပဲ ရှုမြင်သုံးသပ်နေကြတာပါလား ဆိုတာကို သိမြင်လာပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အဲဒီ အမြင်ဟာ အပေါ်ယံအမြင်ပဲ ရှိတော့မှာပေါ့။
စာရေးဆရာ Chai Na Pol Akarasupaset က Real Values (စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုး) ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်ထဲမှာ The Foolish (လူမိုက်)တွေရဲ့ လူ့တန်ဖိုးဖြတ်အမြင်ကို ဒီလိုရေးသားထားပါတယ်။
The foolish perceive man’s value by his conduct, they understand only the exterior.
လူမိုက်တွေဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သူတို့ရဲ့ အပြုအမူ၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ပဲ ရှုမြင်တတ်ကြတယ်။ သူတို့ဟာ အပေါ်ယံကိုပဲ နားလည်တယ်။
လူတွေထဲက လူတွေမပြောနဲ့။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်တုန်းကတောင် ပုထုဇဉ်ရဟန်းတွေရဲ့ အပေါ်ယံ ရှုမြင်တတ်ပုံနှင့် ပတ်သက်လို့ သာဓကတစ်ခု ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သာသနာတော်မှာ ဧတဒဂ်ဘွဲ့ရ ရဟန္တာမထေရ် မြတ်ကြီးတွေ (၄၁)ပါး ပေါ်ထွန်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အရှင်လကုဏ္ဍကဘဒ္ဒိယမထေရ်မြတ်ကြီးလည်း တစ်ပါးအပါအ၀င်ပါ။ မထေရ်မြတ်ကြီးရဲ့ အသံတော်ဟာ သာယာချိုမြိန် အေးချမ်းလှတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မထေရ်မြတ်ကြီးဟာ အဆင်းတော့ မလှပရှာပါဘူး။ ပုပုကွကွနဲ့ အကြည့်ရဆိုးတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သီတင်းသုံးဖော် ရဟန်းတွေက အချိုးမကျတဲ့ ခန္ဓာပိုင်ရှင် မထေရ်မြတ်ကြီးကို လှောင်ပြောင်ကြပါတယ်။
အသံချိုမြိန်လွန်းလို့ အသံသာတဲ့အရာမှာ ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ရထားပေမယ့် အဆင်းမလှပြန်တော့ ပုထုဇဉ်ရဟန်းတွေအတွက် ကဲ့ရဲ့စရာ ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။
ပုထုဇဉ်ဆိုတာကလည်း အလွယ်တကူ ပြစ်မှားတတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက် ရှိသူတွေ မဟုတ်လား။ အပေါ်ယံရှပ်မြင်တဲ့ အမြင်နဲ့ လောကကြီးကို ကြည့်နေခဲ့တာ ကြာပြီဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ပြစ်မှားလွယ်တဲ့ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံမှုတွေကြောင့် တစ်ချိန်မှာ ပြန်ဆပ်ရမယ့် ၀ဋ်ကြွေးနဲ့ အပြစ်ဒဏ်ကို မသိကြရှာဘူး။ ဒါကို ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက မဟာကရုဏာဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ မြင်တော်မူပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ရဟန်းပရိသတ်တွေ စုံညီတဲ့အချိန်မှာ အရှင်လကုဏ္ဍကဘဒ္ဒိယ မထေရ်မြတ်ကြီးရဲ့ စင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ကိုယ်တော်တိုင် ဖော်ထုတ်ချီးမွမ်းတော် မူခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအခါကျမှ ပုထုဇဉ်ရဟန်းတွေရဲ့ ပြစ်မှား ပုတ်ခတ်ပြောဆိုမှုတွေဟာ ရပ်တန့်သွားပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ပုထုဇဉ်ဘ၀ဆိုတာ အင်မတန် ကြောက်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ဉာဏ်အလင်းက မပွင့်သေးတော့ စိတ်က အမှောင်တိုက်ထဲမှာ နေနေရသလိုပါပဲ။ ဒီတော့ကာ အန္တရာယ်တွေကို ပွေ့ပိုက်ထားသူတွေနဲ့ တူနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာတွေ၊ ပေတွေထဲမှာ ဗာလာနံ - လူမိုက်လို့ သုံးတာပေါ့။ တကယ်တော့ အန္ဓပုထုဇဉ်ဆိုတာကိုက ဗာလာနံ - လူမိုက်တွေ အများစုပါပဲ။
လူလိမ္မာကတော့ အသိဉာဏ်မြင့်လာသူပီပီ လူမိုက်တွေလောက်တော့ မရမ်းတော့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာလည်း လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေဆဲပါပဲ။ စာရေးဆရာက လူလိမ္မာတွေရဲ့ လူ့တန်ဖိုးအမြင် သတ်မှတ်ချက်ကို ဒီလို ရေးဖွဲ့ထားလေရဲ့။
The clever perceive man’s value by his power, they understand only half.
လူလိမ္မာတွေက လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကို သူ့ရဲ့တန်ဖိုး အာဏာ စွမ်းပကားနဲ့ ရှုမြင်တယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ဝက်လောက်ပဲ နားလည်တယ်။
ဒီစာပိုဒ်ကို ဖတ်ရတော့ အရှင်ဒေ၀ဒတ်ကို ချက်ချင်း မြင်ယောင်မိပါတယ်။ ပါရမီဓာတ်ခံ ကောင်းခဲ့သူဆိုတော့ အရှင်ဒေ၀ဒတ်ဟာ သမထစွမ်းအားနဲ့ လောကီအဘိညာဉ်ကို ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သစ္စာတရားကို သူ မမြင်ဘူး။ သူ့တန်ခိုးစွမ်းအားလောက်နဲ့ ဘုရားကိုပြိုင်ဖို့ စဉ်းစားတယ်။ ဘုရား သာသနာတော်မှာ ရှိတဲ့ လက်ဝဲရံ၊ လက်ယာရံ ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေကိုတောင် သူ့လက်အောက်မှာ ထားချင်တယ်။ ဘုရားထံပါး ချဉ်းကပ်ပြီးတော့လည်း ဘုရားရဲ့တပည့်တပန်းတွေကို သူ့ကိုပေးဖို့ သွားတောင်းသေးတယ်။ မရတဲ့အပြင် ဘုရားရှင်ရဲ့ ပြစ်တင်မောင်းမဲတာ ခံရတော့ အရှက်ကြီးရှက်ပြီး ဘုရားရှင်ကို လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ဖို့အထိ ကြံစည်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဝက်အမြင်ဆိုတာ တကယ်တော့ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ကွက်လပ်ဖြစ်နေသေးတဲ့ အမြင်ပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျပ်မပြည့်တဲ့ အမြင်ပါပဲ။ အဲဒီတော့ ဝေါဟာရအနေနဲ့သာ လူလိမ္မာဖြစ်နေတာ။ စိတ်ကတော့ မိုက်တဲ့ဘက်ကို ဦးလှည့်နေတုန်းပဲ။ ရထားတဲ့ တန်ခိုးစွမ်းအားဟာ သာသနာပြုရာမှာ လျင်မြန်ဖို့၊ အများအကျိုးကို အချိန်တိုတိုနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပါလားလို့ နှလုံးသွင်းပြီး သစ္စာတရားကို သိမြင်ဖို့အတွက် ဆက်ပြီး ကြိုးစားသွားရဦးမှာပါလားလို့ ဉာဏ်မသွင်းတတ်တော့ လောကီအဘိညာဉ် ရလျက်သားနဲ့ လူမိုက်စာရင်းဝင်ပြီး ဇတ်သိမ်းမလှ ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့။
ဒါကြောင့် တန်ခိုးအာဏာ၊ ပါဝါ၊ စွမ်းအားဆိုတာတွေဟာ ဉာဏ်မပြည့်စုံသေးတဲ့ (ဉာဏ် တစ်ဝက် ဖြစ်နေသေးတဲ့) လူတွေရဲ့လက်ထဲရောက်ရင် အင်မတန်ကို အန္တရာယ်များလှပါတယ်။
ဒီအတွေးဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာပဲ မှတ်စုစာအုပ်ထဲက အလွတ်ရလုနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ စာပိုဒ်အချို့ကိုလည်း တစ်ဆက်တည်း သတိရမိပါတယ်။
အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ သူများထက်သာသွားတာကို မဆိုလိုပါဘူး။ ပြိုင်ပွဲမှာ ပထမရတာ၊ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့ နေနိုင်တာ၊ ရာထူး အမြင့်ဆုံးရတာ၊ ဘွဲ့ထူးကြီးကြီး ရထားတာ၊ ဂုဏ်ပြုတာတွေ ခံရတာတွေဟာ အောင်မြင်မှုအစစ် မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကိုယ်တကယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ် မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်၊ ကိုယ့်ဝါသနာစရိုက် ပါရမီနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်၊ ကိုယ့်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ လူ့သဘာဝမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အခြေခံပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ရတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တဲ့သူဟာ အောင်မြင်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူမျှမသိကြလည်း အောင်မြင်တဲ့သူပဲ။
ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး မြင့်မားစေရန် စာအုပ်ထဲကပါ။
ဒါကြောင့် တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ လောကကြီးထဲမှာ သူ့အမြင်၊ သူ့ထောက်ခံချက် ရဖို့ထက် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ့်သန္တာန်မှာ စင်ကြယ်နေဖို့ အဓိကပါ။ အထင်ဆိုတာကိုက အမြင်လောက် မတိကျပါဘူး။ ခန့်မှန်းတယ်ဆိုကတည်းက မှန်ချင်မှလည်း မှန်မယ်ဆိုတာ သိထားပြီးရင် ကိုယ်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်ကို အကောင်းဆုံး ဆက်လုပ်နေဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စဟာ ကောင်းမွန်မှန်ကန်မှုနဲ့ စင်ကြယ်မြင့်မြတ်မှုရှိ မရှိကိုတော့ စင်ကြယ်သူတွေ၊ စိတ်သန့်စင်သူတွေက သိနိုင်ကြပါတယ်။ လောကမှာ သိစရာမှန်သမျှကို စိတ်နဲ့သိရတာပါ။ စိတ်စင်ကြယ်သူဟာ သိစရာမှန်သမျှကို အကုန်သိမြင်ပါတယ်။ စိတ်စင်ကြယ်တဲ့သူဟာ ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်း အသေအချာသိသလို သူတစ်ပါး စိတ်ကိုလည်း သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုသိနိုင်မှသာ ပညာရှိစာရင်းဝင်မှာပါ။
စာရေးဆရာရေးသားထားတဲ့ ပညာရှိတွေရဲ့ လူ့တန်ဖိုးဖြတ်အမြင်ဟာ အတော့်ကိုလေးနက် ပါတယ်။
The wise perceive man’s value by his purity, they touch the inner most core of life.
ပညာရှိကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သူ့ရဲ့ သန့်စင်မှုနဲ့ ရှုမြင်တယ်။ သူတို့ဟာ ဘ၀ရဲ့ အတွင်းအကျဆုံးအရာကို ထိတွေ့ကြတယ်။
ဖုန်တွေ အလူးလူးပေကျံနေတဲ့ ကြေးမုံပြင်တို့၊ ရေခိုးရေငွေ့တွေ ရိုက်ခတ်ထားတဲ့ မှန်မျက်နှာပြင်တို့မှာ ပုံရိပ်တွေ ထင်ထင်ရှားရှား မပေါ်နိုင်သလိုပါပဲ။ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့စိတ်၊ အညစ်အကြေးတွေ ထူပြောနေတဲ့ စိတ်တွေရဲ့ မျက်နှာပြင်တွေမှာလည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို အမှန်အတိုင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အမြင် ပေါ်နိုင်ဖို့ခက်လှပါတယ်။ သန့်ရှင်းနေတဲ့စိတ်၊ အညစ်အကြေး ကင်းစင်နေတဲ့ စိတ်တွေရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ အမှန်အတိုင်း အတိအကျ ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူများကို အမှန်အတိုင်းရှုမြင်ချင်ရင် ကိုယ့်စိတ်ကို အရင်သန့်စင်အောင် လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါမှသာ “စိတ်သန့်စင်သူသည် စိတ်မသန့်စင်သူကိုလည်း သိသည်။ စိတ်သန့်စင်သူကိုလည်း သိသည်” ဆိုတဲ့ စကားရပ်အတိုင်း ဖြစ်တော့မှာပေါ့။
လောလောဆယ်မှာတော့ ကိုယ့်စိတ်ဟာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ အညစ်အကြေးတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးပွေလိမ်ပြီး မသန့်မစင် ဖြစ်နေသေးရင်တော့ “စိတ်မသန့်စင်သေးသူသည် စိတ်မသန့်စင်သူကိုလည်း မသိ၊ စိတ်သန့်စင်သူကိုလည်း မသိ” ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ ၀န်ခံရတော့မှာပါပဲ . . . . .
Posted by The Bliss Of Emancipation at 6:36 AM0comments Links to this post
Labels: Mya Than San